Camera, Photo & Video – ICT.com.mm
Sony NP-BX1 X-Series Rechargeable Battery PackK59,000
Sony NP-BN1 Rechargeable BatteryK59,000
Sony NP-FZ100 Z-series Rechargeable Battery PackK123,000
Sony BC-QZ1 Battery Charger for NP-FZ100K186,000
Sony VCT-SGR1 Shooting GripK234,000
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Lithium ion Type X rechargeable battery Approx. Capacity: 3.6V / 4.5Wh (1240mAh) Approx. Dimensions (mm): 29.9 x 9.2 x 42.7 Approx Weight: 25g
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Slim battery (.2 inches) with high density energy 3.4Wh battery capacity DC3.6V (mean) output voltage Designed to fit compatible Cyber-shot digital cameras
Sony NP-FZ100 Z-series Rechargeable Battery Pack
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Capacity: 7.2V / 16.4Wh (2280mAh) Dimensions (W × H × D): Approx. 38.7 x 22.7 x 51.7 mm (1 9/16 x 29/32 x21/8 inches) Weight:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Power: AC, 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz Charging Time: Approx. 150 minutes Dimensions (W × H × D): Approx. 70 x 33 x 95 mm...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Get great shots wherever you go with this compact, lightweight shooting grip for Cyber-shot cameras. Adjustable shooting angles and instant conversion toamini-tripod for creative and...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Designed for SLT and Compact System Cameras (NEX)- Compatible witharange of NEX and SLT cameras so you can take control of photo and movie composition from...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ No batteries needed — runs on power supplied by your camera Take charge with the detailed audio control settings Mic holder diminishes low frequency vibration noise XLR...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Use the included cord adjuster foracustom experience Compact size makes the Remote Commander easy to take anywhere Compatible with multiple Sony camera models Take clear,...
Sony ZV-1 Cyber-shot Digital Camera
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Large 1.0-type Exmor RS CMOS image sensor BIONZ XTM image processing engine 4K movie recording Directional 3-capsule mic with wind screen Vari-angle LCD screen, body grip and...
Sony ALC-B1EM Replacement Body Lens Cap
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Replacement body lens cap for E-mount style cameras Ideal protection while travelling or during storage Protects your camera body from dust and dirt when not attached to...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: Glass Dimensions (W x H x D): Approx. 2-7/8 x 2-1/8 x 1/32" (70.4 x 52.1 x 0.51 mm) Weight: Approx. 3.6g (0.2 oz)
Sony DSC-WX800/B Cyber-shot Compact High-zoom Camera
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-720mm5 zoom lens 4K12video recording with full pixel readout Fast Intelligent AF and Eye AF to instantly capture the moment 180° tiltable...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Material: PC, Silicone rubber Dimensions (W × H × D): Approx. 45.4 x 25.0 x 8.0 mm (1 13/16 x 1 x 11/32 inches) Weight: Approx. 3.0...
Sony STP-SS5 Shoulder Strap
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Simple design, contrasting logos and cinnabar line Soft, woven strap can be wrapped around the hand for secure shooting A wide strap lightens the load on shoulders...
Sony HVL-F32M External Flash For Multi Interface Shoe
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Auto electronic flash (clip-on type) with pre-flash metering Shoe Type: Multi Interface Shoe Maximum Guide Number: 31.5 (Flash coverage setting 105mm/STD flash distribution,ISO100・m) Flash Mode: TTL/Manual...
Sony DSC-H300 Cyber-shot Digital Camera with 35x Optical Zoom
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 20.1MP Super HAD CCD sensor 35x optical zoom lens Optical SteadyShot™ reduces blur even in low light HD video capability for beautiful video Sweep Panorama to capture...
Sony LCS-SL20 Soft Carrying Case
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Adjustable inserts for custom storage Pockets for various accessories Suitable for cameras and camcorders Hand strap and shoulder strap
Sony HDR-CX405E Handycam with Exmor R CMOS sensor
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Optical SteadyShot™ with Intelligent Active Mode XAVC S (HD 50 Mbps) and AVCHD recording Exmor R™ CMOS sensor 26.8mm wide-angle ZEISS lens with 30x optical zoom 60x...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Balanced Optical SteadyShot with 5-axis Intelligent Active mode13 4K Ultra HD (3840 x 2160) recording 26.8mm714 wide-angle ZEISS® Vario-Sonnar T* lens 20x optical zoom with 30x/40x (4K/HD)8...
Sony SELP 18-105 F4 G OSS Standard Zoom Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ G Lens standard zoom Approx. 6x powered zoom Constant F4 maximum aperture 7-blade circular aperture ED glass elements effectively reduce chromatic aberration Minimum Focus Distance: 0.45 (Wide)-0.95m...
Sony SEL55-210 F4.5-6.3 OSS Telephoto Zoom Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Telephoto zoom lens with 3.8x magnification range Built-in OSS (Optical SteadyShot™) image stabilisation Quiet, responsive autofocus with stills and video High-performance optics and aluminium alloy finish 35mm...
Sony SEL 24-240 F3.5-6.3 OSS Super Zoom Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 24mm wide end for more dynamic perspectives 10x zoom Circular 7-blade aperture for beautiful defocus effects Built-in OSS (Optical SteadyShot™) image stabilisation Dust and moisture resistant design...
Sony SEL 85 F1.8 Mid-range Telephoto Prime Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Mid-range telephoto prime ED glass for chromatic aberration compensation Circular 9-brade aperture for beautiful defocus effect Linear motor for precise, quiet focusing Dust and moisture resistant design...
Sony SEL 50 F1.8 F Standard Lens
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Compact, lightweight, easy to carry F1.8 maximum aperture for low-light shots 7-blade circular aperture for beautiful defocus effects 75mm (35mm equivalent) focal length with APS-C sensor Minimum...